MAPAR : nametraka fitoriana hanalana ireo solombavambahoaka tsy nanaraka ny toromarika | Canalnews Madagascar
Home A LA UNE MAPAR : nametraka fitoriana hanalana ireo solombavambahoaka tsy nanaraka ny toromarika
MAPAR : nametraka fitoriana hanalana ireo solombavambahoaka tsy nanaraka ny toromarika
By Nirinaavr 02, 2015, 06:12 0
Voapetraka omaly ny fitoriana ho fanesorana an’ ireo solombavambahoaka lany tamin’ ny anaran’ ny MAPAR. Miisa fito izy ireo no angatahana esorina amin’ ity andiany voalohany ity, hoy ny solombavambahoaka RAZAFITSIANDRAOFA Jean Brunelle. Tsy nanaraka ny toromarika nataon’ ny vondrona politika MAPAR no antony hanalana azy ireo, hoy izy. Nomena izany ny filohan’ ny antenimierampirenena sy ny HCC. Tsy hijanona amin’ ny ireo fito ireo ihany anefa ny fanesorana fa mbola hisy ny andiany manaraka. Azo lazaina izany fa maro ireo solombavambahoaka MAPAR no tsy nanaraka ny hevitry ny vondrona ny birao politika ary indrindra ny fisian’ ireo solombavambahoaka mivondrona ao amin’ ny MAPAR II.
Interview : RAZAFITSIANDRAOFA Brunelle
Previous PostFISEMA : mitombo avo roa heny ireo tsy fanarahan-dalana ataon’ ny mampiasa noho ny fitokonan’ ireo « inspecteur de travail » Next PostRAHARAHA ALAIN RAMAROSON: Niala maina ireo mpanao fanadihadiana, tsy mitombina ny fanenjehana.